फेरि होला लकडाउन ? - HelloKhabar
२०७७ चैत्र ११, बुधबार ०९:२६
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम गत वर्षझैं मुलुकभर पुनः लकडाउन घोषणाको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। ‘एन्टिजेन परीक्षण र घरमा बस्न नसक्नेलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ’, प्रवक्ता डा. गौतम भन्छन्, ‘तत्कालै लकडाउनको योजना छैन। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनालाई जोड दिनुपर्छ। संक्रमण बढेकाले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। मास्क लगाउनुपर्छ। साबुनपानीले राम्रोसँग हात धुनु वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ।’ नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न सक्ने हुँदा देशभर भीडभाड हुने कार्य नगर्न/नगराउन अनुरोध गरिएको डा. गौतम बताउँछन्। अन्नपुर्णमा खबर छ ।
काराेबार हेलाेखबर - २०७७ चैत्र ११, बुधबार ०९:२६
समाज २०७७ चैत्र ११, बुधबार ०९:२६
मुख्य समाचार २०७७ चैत्र ११, बुधबार ०९:२६
ब्यानर २०७७ चैत्र ११, बुधबार ०९:२६